Bevohokan’ny lehilahy iray efa nanambady aho ary nilaozany.
5 taona ilay zaza amin’izao, izy kosa tsy hita intsony mihitsy. Tamin’ny herintaona indray, nisy lehilahy niaraka tamiko ary fantany tsara fa efa niteraka aho.
Efa nentiko tany amin’ny ray aman-dreniko izy ary nilaza fa haka vady ahy. Bevohokany koa aho, saingy lasa izy, fa lazainy hoe : tsy zanany ilay tao an-kiboko. Efa 3 volana ilay zaza izao ary mitovy be aminy. Antsoina io lehilahy io ary milaza ho avy foana, nefa hatramin’zao mbola tsy tonga mihitsy. Mety mbola afaka manantena azy ve aho ?
Raha lehilahy tena tia ny zanany, efa nihazakazaka ohatr’izay satria mamy izany menaky ny aina izany. Matoa izy tsy tonga hatramin’izao, dia misy zavatra heveriny ho lehibe kokoa noho ilay zanany. Araka izany, fahendrena ny tsy manantena azy intsony. Ny fiainanao sy ny an’ireo zanakao no ezaho izay hahatsara azy, dia isintony anatra ireo sedra efa nahazo anao ireo, izany hoe : aza manakim-po vetivety loatra amin’ny lehilahy tsy azo antoka. Raha toa anefa ka maniry ny hijery an-janany ireo lehilahy ireo, dia tsy dia zonao loatra ny manakana, satria manan-jo hahafantatra ny rainy ny ankizy rehetra. Na izany aza, apetraho ny fepetra, satria ianao no tompon’antoka voalohany amin’ny fiainan’ny zanakao. Isan’ny fepetra tsara raisina, ohatra, raha te hiditra amin’ny fiainan’ilay zaza ilay lehilahy, ny fanjanahany azy, izay mamatotra azy araka ny lalàna, fa tsy maintsy manatanteraka ny adidiny amin’ny zanany izy.
Tsy miraharaha ahy mihitsy ny olon-tiako, tsy mandefa sms intsony. Rehefa noteneniko izy dia nilaza fa tsy manana “credit”. “Rappelle-moi” na “bip” anefa, hoy aho taminy dia mety. Tsy nandefa koa izy. Rehefa noteneniko indray izy dia nolazainy fa tsy matoky azy mihtsy aho sady mila vaniny. Dia nisarahako izy satria tsy zakako ilay tsy raharahina, nefa izy mbola tiako. Inona no tokony ataoko ? Mety mitombina ve ny teniny ?
Raha olona tena tia dia mandefa “signe” kely amin’ny olon-tiany foana, in-dray mandeha isan’andro. Mety antso io, sms, na hafatra anaty Facebook… Mety mitombina ihany angamba ilay hoe : tsy misy fahana, saingy araka ny voalazanao, azo atao ny mandefa ireny tolotra tsy andoavam-bola ireny. Fomban’ny lehilahy sasany io mamototra ny olana any amin’ny olona miaraka aminy io, satria fantany fa mety ho voarebirebin’izany ny sain’ilay vehivavy. Rariny ny anao raha nisaraka taminy, satia tena tsy miraharaha anao tokoa izy, ka aza asiana nenina akory. Atreho ny fiainanao ho avy, fa tsy mendrika ny hitomaniana akory izy.
Niaraka tamina lehilahy aho, efa-bolana izao. Nisy vehivavy niantso anefa aho, nilaza fa vadiny ary toriany, hono aho, fa manadala ny vadiny ary tsy amelany raha tsy migadra. Izaho anefa tsy nahalala akory fa efa manam-bady izy. Matahotra be aho.
Mety mampigadra tokoa ny fiarahana amin’ny vadin’olona, saingy tsy ianao irery no midoboka amin’izany, fa ilay lehilahy koa, raha toa ka sazy an-tranomaizina tokoa no mivoaka eny amin’ny fitsarana. Amin’ny ankapobeny, fampitahorana ihany io ataon’ilay vehivavy io, mba hampisarahana anao amin’ilay lehilahy, fa tsy hitory loatra akory izy. Na izany aza, efa fantatrao izao ny marina, dia aleo misaraka, sao tena manana porofo ahafahana mitazona anareo tokoa ilay vehivavy.